CAN 2021 & Mondial 2022 :: Hijery mpilalao any Frantsa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea • AoRaha
CAN 2021 & Mondial 2022 Hijery mpilalao any Frantsa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea
Hiatrika fifanina­nana goavana roa ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny taranja baolina kitra na ny Barea amin’ity taona ity. Handray anjara amin’ny dingana fifanintsanana ho an’ny firenena aty Afrika amin’ny fiadiana ny amboara maneran-tany sy ny tohin’ny dingana fifanintsanana amin’ ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021 ny Barea. Eo am-pijerena sy am-pandinihana tanteraka an’ ireo mpilalao mendrika ny handrafitra an’izany ekipam-pirenena izany i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea.
“Mbola handeha any Frantsa aho amin’ny herinandro ambony hijery an’ireo mpilalao malagasy milalao any Frantsa”, hoy ity teknisi­ana frantsay ity.
Nilaza i Nicolas Dupuis fa “hivoaka amin’ny volana febroary ho avy izao ny lisitra ahitana an’ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena”. Izay voafantina no hiatrika ny CAN sady hilalao amin’ny dingana fifanintsanana amin’ ny lalao maneran-tany ho an’ny aty Afrika.
Manaraka hatrany ny fivel­aran’ireo mpilalao mivoatra eto Madagasikara ihany koa izy, raha ny nambarany.
“Mijery an’ireo mpilalao eto an-toerana aho, indrindra ireo mandray anjara amin’ny fifani­nanana “Orange Pro League”, amin’izao fotoana izao”, hoy indray izy.
Mikendry ny ho tafita amin’ ny CAN 2021 ny Barea noho isika efa tonga tamin’ny dingana ampahefa-dalana tamin’ny taona 2019. Mita­rika vonjimaika ny filaharana ao amin’ny vondrona K ny Malagasy, noho ireo fandre­sena roa azo tamin’ny volana novambra 2019 (Madaga­sikara-Etiopia: 1-0, Madaga­sikara- Nizera: 6-2) ao anatin’ ny dingana fifanintsanana amin’ny CAN 2021. Hifandona voalohany amin’i Côte d’Ivoire indray isika amin’ny 31 aogositra 2020. Hotante­rahina amin’ny 8 septambra 2020 ny lalao miverina. Amin’ ny 5 oktobra kosa vao hiha­ona faharoa amin’i Etiopia ny ekipam-pirenena. Hatao amin’ny 9 novambra ny lalao miverina amin’i Nizera.
Amin’ny 27 ka hatra­min’ ny 29 marsa 2020 kosa ny fandraisantsika anjara voalohany amin’ny dingana fifanin­tsanana amin’ny fiadiana ny lalao maneran-tany ho an’ny firenena aty Afrika. Amin’ny 5 ka hatramin’ny 7 jona ny andro faharoan’izany dingana izany.
Haiady tolona-fifaninanam-pirenena :: Niavaka ireo mpikatroka avy ao amin’ny Cosfa, Cospn ary ny Rossary